Akụkọ - Gini mere ị ga - eji họrọ Plywood na LVL Scaffold Plank?
1, Ihe nkiri chere ihu na plywooddị fechaa, na-eguzogide ọgwụ ọgụ na mmiri, na-adị mfe ijikọta ya na ihe ndị ọzọ ma dị mfe ihicha ma belata. Na-emeso ihe nkiri ahụ ihu plywood n'ọnụ ya na agba na-enweghị mmiri na-eme ka ọ nwee nnukwu mmiri na-eguzogide ọgwụ. Ruru ya anwụ ngwa ngwa na mfe edozi ya ọ ga-eji na-emeghe gburugburu ebe obibi na-ewu na ụlọ.
Ikpuchi fim chere ihu plywood na elu-edu mbubata fim ana achi achi ike na mmebi na-eguzogide.
Elu nke ihe nkiri chere ihu na plywood dị ọcha ma na-eguzogide ọgwụ siri ike.
Enwere ike iji ya na ọnọdụ nke oke okpomọkụ dị elu, mmetụta nke mmiri, nhicha nhicha ma nye nchebe megide oge.
Anyị na-enye ụdị ihe nkiri abụọ esiri plywood. Nke mbụ ịbụ ihe nkiri nke birch chere ihu na plywood nke na-eguzogide ọgwụ na mmiri, ọ dị mfe ihicha ma bepụ yana otu n'ime plywood kacha mma kachasị mma n'ụwa. Typedị plywood a dịkwa mfe ihicha ma belata ma dị nro ma dị mfe karịa ihe nkiri birch chere ihu na plywood.
2, Ihe: Structural laminated mkpuchi osisi (LVL)
Kpụrụ: AS / NZS 4357 Structural laminated veneer lumbar GB / T 20241- 2006 Standard for laminated veneer lumber ANSI A10.8 - 2001, Safety Requirements for Scaffolding OSHA, Pụrụ iche Safety & Health Administration, US Dept. of Labour, Regulations (ardskpụrụ - 29 CFR) Nkọwapụta Scaffold - 1926 Subpart L, Ihe Odide A BS 2482 Nkọwapụta maka Timber Scaffold Boards
Fechaa na inogide (ọ bụ lightest arọ laminated osisi scaffolding plank na ahịa), na scaffolding plank bụ dimensionally mụ na-eri irè. A na-ewepụ ụkpụrụ enweghị mmetụ mebiri emebi ka a na-ewepụ ntụpọ dị ukwuu yana mbupụta pụta ụwa. Enweghi ihe ozo achoro, choro idozi nsogbu na nsogbu.
Njirimara nke LVL Scaffolding plank
1.Ọganihu na nchekwa (OSHA)
2.Unrivalled bughi rigidity, kwụsie ike na ike
3.Proven dịkarịa ala dị ka ogologo oge ogologo osisi
4.10% Mkpa ọkụ karịa osisi siri ike Ẹkot
5.No metal ọgwụgwụ gbalaga chọrọ
6.Ọ dịghị mmezi na-aga n'ihu ma ọ bụ ndozi ndozi chọrọ
7.Excellent eletriki mkpuchi ihe
8.Excellent anti-corrosive na chemical Njirimara
Ngwa & ikwu:
Ejiri ya dochie mbadamba ígwè ma ọ bụ osisi osisi. Osisi LVL Scaffold dị ọnụ ala, sie ike ma dịte aka, ọkachasị na enviroments na-emebi emebi. Wax emulsion ọgwụgwụ akara na-ebelata mmiri ingress. A na-enweta osisi site na FSC gbaara agba agba nke pụtara na ọ na-adịgide. LVL Scaffold planks na-adịgide adịgide ma nwee ogologo ndụ ogologo, ha dịkwa mfe ma dịkwa mfe ijikwa.